Bannaanbax maanta lagu wado in uu ka dhaco Magaalada Muqdisho | Baydhabo Online
Raaf ka dhan ah Mootooyinka Bajaajka oo Muqdisho ...
Korea-da Waqooyi oo ka fiirsanaysa la kulanka Trump
Bannaanbax maanta lagu wado in uu ka dhaco Magaalada Muqdisho
Bannaanbaxan, ayaa waxaa la sheegay in lagu taageeri doono magacaabista Golaha Wasiirada cusub ee Xukuumadda Ra’iisal Wasaare Xasan Cali Khayre.
Ra’iisal Wasaare Khayre, ayaa Talaadadii soo magacaabay 68 xubnood, oo ay kala yihiin Ra’iisal Wasaare Kuxigeen, 26 Wasiir, 26 Ku Xigeeno iyo 15 xubdoon oo Wasiiru Dowlayaal ah.
Bannaanbaxan, ayaa waxaa qaban qaabinaya Maamulka Gobolka Banaadir, waxaana lagu wadaa inuu ka dhaco Taalada Daljirka Daahsoon ee Degmada Boondheere, iyadoo ay ka qayb galayaan masuuliyiinta Maamulka Gobolka.
Taalada Daljirka Daahsoon ee Degmada Boondheere oo bannaanbaxan loo qorsheeyay ayaa iminkaba waxaa ku sii sugan ciidamada Nabad Suggida iyo Booliska oo xiray wadooyinka halkaasi soo gala, si ammaanka gacan loogu qabto.
Dadweyne ka kala yimid Degmooyinka Gobolka Banaadir oo ay isku soo aruuriyeen maamulada Degmooyinka ayaa la filayaa inay ka qayb galaan bannaanbaxaasi, goor dhaw la qorsheynaayo inuu ka biloowdo Daljirka Daahsoon.
Waa bannaanbixii ugu horeeyay ee taageero loogu muujinaayo Xukuumadda magacaaban ee weli sugeysa codka kalsoonida Baarlamaanka Federalka Somaliya.
Maamulka Gobolka Banaadir ayaa inta badan dhiga dibadbaxyadda noocaan oo kale ah oo lagu taageeraayo tallaabooyinka ay qaadaan masuuliyiinta sar sare ee dalka.